mairie-antananarivo – Fanatsarana ny tsena Besarety
Fanatsarana ny tsena Besarety
administrateur 19 jolay 2018 Commentaires fermés
Tafiditra ao anatin’ny vinan’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana ny fanatsarana ny tanàna, indrindra ny tsena eto Antananarivo Renivohitra. Manambara izany indrindra ny delegen’ny Boriboritany fahatelo Rado Andriamamonjisoa fa efa nisy ireo fanatsarana ny tsena izay efa natao tetsy Andravoahangy: fanamboarana ny pavé, ny tsena, ny “étale”. Ary amin’izao indray dia miitatra mankany amin’ny tsenan’i Besarety indray ny fanatsarana izay ataon’ny boriboritany fahatelo.
Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra dia hita fa tena miparitaka mivoaka eny ivelan’ny tsenan’i Besarety ny mpivarotra amoron-dalana fa tsy mety miditra ka raha natao ny fanadihadihana dia hita fa ny tsena mihitsy no mila fanamborana . Ka nanapa-kevitra ny Kaominina Antananarivo fa hasiana ny fanamboarana . Araka izany dia efa niroso tamin’ny fanamboarana ny tsena ny avy ao amin’ny boriboritany fahatelo tamin’iny herinandro lasa iny. Marihana fa misy ny fiarahamiasa amin’ny mpiara-miombon’antoka.
Hamboarina amin’izany ny tsena hivarotan’ny mpivarotra legioma izay hita fa manavia ny mpividy ny fitodihany, ny fanatsarana ny “bassin lavoir”, fametrahana dabam-pako, lokoina mitovy ny tsena pavillon, hatsaraina ny lakandrano .
Ezahina ho vitaina ao anatin’ny iray volana ny fanatantehana ny fanamboarana ny foto-drafitrasa.